Into enukayo ngePlagi yeWordPress Ukulinganisa kunye nokuPhononongwa | Martech Zone
Ukuba negalelo kwintshukumo yemithombo evulekileyo kunokuba yinto emangalisayo, kodwa kule veki ibingeloxesha lawo. Sibe negalelo kuluntu lweWordPress kwiminyaka elishumi ngoku. Sakhe iiplagi ezingenakubalwa. Abanye bathabathe umhlala-phantsi, kwaye abanye banombono omangalisayo. Eyethu Iwijethi yomfanekiso weRotator iplagi, umzekelo, ikhutshelwe ngaphezulu kwamaxesha e-120,000 kwaye iyasebenza ngaphezulu kweendawo ze-WordPress ze-10,000.
Iplagi enye esityala kuyo amakhulu eeyure kuyo I-CircuPressIphepha leendaba le-imeyile esilungiselele iWindowsPress. Iplagi intle inobukrelekrele, ivumela iiarhente ukuba zakhe i-imeyile kanye njengokuba bebeya kwenza iphepha lomxholo… kodwa ukuthumela i-imeyile ngenkonzo yethu ukuze sikwazi ukulawula ukulandelela ukucofa, ulawulo lokubhabha, ababhalisile kunye nemirhumo. Kuthathwe kancinci umsebenzi weziseko zophuhliso ukwenza oku kuqhubeke, kodwa sikulo ixesha elide. Siyakholelwa ukuba abasebenzisi be-WordPress kufuneka babe neqonga le-imeyile lendalo ekulula ukuyisebenzisa.
Ngelixa sinyusa iqonga, asikhange sihlawulise umntu omnye wokulisebenzisa- kulungile xa undibuza. Ubhaliso lubonelela ngohlobo lwasimahla ukuba uthumela ii-imeyile ezingaphantsi kwe-100 ngenyanga, kodwa siyongeze loo nto ngelixa siguqula inkqubo yamatyala WooCommerce kwaye usebenze kuseto lweqonga ukwenza kube lula kubasebenzisi.
Ndothukile, sineenkwenkwezi ezi-1 zokuphononongwa kwesiza sePlagi. Ndikhawuleze ndangxama ukubona ukuba yintoni engalunganga:
Ke… lo msebenzisi akazange abhalise kodwa wathi babekrokrela inkqubo yethu yobhaliso. Ndaye ndothuswa okoko thina musa ukucela ulwazi lwekhadi letyala. Ngewayifumanisile ukuba wayigqibile inkqubo yobhaliso, kodwa akenzanga.
Ndacinga ukuba oku akulunganga ngokwaneleyo ukuba kukwazise Automattic, Ukubhala umntu oxhasa iPlagi:
Impendulo endiyifumeneyo yayothusa ngakumbi kunophononongo ngokwalo. Ndahamba ndisiya ngapha nangapha nomntu e-Automattic esithi indawo yethu ibonakala ngathi similo kuba akukho maxabiso adwelisiweyo esidlangalaleni. Umthunzi?
Ndimkhumbuze ukuba thina SUKUCELA NALIPHI IKHADI LAMATYALA ulwazi ngaphambi kokubonisa amaxabiso kulowo mntu. Kwaye emva koko ASIKHO NGOKUQINISEKILEYO ukuhlawulisa abasebenzisi bethu bokuqala. Ngaba wakhe wabhalisela inkonzo engabizi mali? Ndiqinisekile u… WordPress ucela ubhaliso ngaphandle kolwazi lwamaxabiso kwiinkonzo ezongezelelweyo. Umthunzi?
Ungayichazanga eyokuba Iphepha lamaxabiso lalibhekiswa kwii-FAQs Iplagi yethu. Okwangoku, ndapapasha iphepha lamaxabiso kwimenyu yethu ukuze kungabikho kubhideka nangubani na, kodwa ndicele ukuba uphononongo lususwe. Impendulo:
Ke, ngamanye amagama, umntu owamkelekileyo andikaze ndiyisebenzise inkonzo yethu ivumelekile ukukala inkonzo yethu ngohlaziyo lwenkwenkwezi e-1. Njengoko sisebenza ukunceda indawo evulekileyo yoluntu kunye nokubonelela ngesisombululo esinexabiso eliphantsi, andiqinisekanga ukuba oku kunceda njani na. Olu luphononongo oluyinyani-umbhali uyavuma ngokupheleleyo ukuba akazange abhalise okanye asebenzise inkonzo yethu.
Ndingaziva ngokwahlukileyo ukuba umvavanyi ubhalisile kwaye wasilinganisela kwizakhono zeplagi- ndide ndongeze ukuba unqwenela ukuba amaxabiso abekhona kwisiza bekuya kuba mnandi. Kodwa uphononongo lwenkwenkwezi e-1 yento angazange wayisebenzisa ayinakuthetheleleka.
UHLAZIYO 11/2: Ngoku ndingu nomsindo, i ishushu, engekho ngqiqweni, i jerk, hlanya, yaye engekho ngqiqweni kuba iyandicaphukisa into yokuba umntu ongazange asebenzise iplagi wanika uphononongo lwenkwenkwezi e-1, waqonda ukuba inkonzo yethu yayinganyanisekanga, kwaye nabani na obhalisileyo waye sidenge. Inkonzo abangazange bayityikitye.
I-imeyile yam yayingezantsi, impendulo yabo ingaphezulu.
Mhlawumbi lixesha lokuba ndenze nje enye into eyenziwa ngabaphuhlisi beeplagi Mat kwaye iqela kwiWordPress alixabisi, kwaye lidlula ekunikeni naliphi na ixesha kunye nomzamo ukubuyela kwiWordPress kwaye uqalise ukuthengisa iiplagi kwindawo yam. Kuyacaca ukuba abakhathali ngabantu abaxhasa iqonga labo.
UHLAZIYO 11/3Namhlanje, iqela lamavolontiya kwiWordPress ligqibe kwelokuba ndifuna imfundo kwezentengiso kwaye landicebisa ukuba ndibengumntu ongcono. I-imeyile yam yayingezantsi, impendulo yabo ingaphezulu.
tags: uMike EpsteinUkulinganiswa kweplagi yegamaiiplagi zegamaUkuphononongwa kwakhona kwe-wordpress
Uyidibanisa njani intengiso yakho yesiqulatho
Nov 3, 2015 ngo-9:58 AM
Ndivumelana nawe kwaye inkqubo yokuphonononga ihamba njengomcebisi wohambo. Akukho mgaqo-nkqubo woqinisekiso lomgangatho malunga nenkqubo yophononongo kodwa uphononongo lusetyenziswa njengendawo yokuthengisa nakwimveliso/iinkonzo ezingasebenziyo njengoko zisitsho okanye umgaqo-nkqubo wokwaphula ilayisensi. Oku akulunganga kwaye akukho ngcaphephe. Kukwakho uphononongo oluninzi lwangaphandle / iinkqubo zokulinganisa kodwa ungala ukukala okuphantsi.
Andikholelwa kwiireyithingi/kuphononongo kuba abalawulwa ngumntu wesithathu ozimeleyo kwaye abanazo izatifikethi zenkqubo (ezifana ne-iso okanye ezifanayo).
Andikholelwa kakhulu kwiimarike ezifana ne-envato okanye ezifanayo. Ngaphambili ndafaka ezinye iingoma (nam ndiyimvumi) kwaye azizange zamkelwe. Ngoku ndibhalela ezinye iinkampani zeemuvi umculo.
Nov 3, 2015 ngo-11:56 AM
Kukho ezinye iinkqubo ezenza umsebenzi olungileyo wolamlo. ULuhlu luka-Angie, umzekelo, lunika umenzi wekontraka ithuba lokulungisa izinto kwaye xa kuvunyelwene ngako njengokwanelisayo, uphononongo olubi lunokuguqulwa. Ngelishwa ukuba olu hlaziyo lumile-aluniki xabiso eluntwini kwaye lunokwenzakalisa ukwamkelwa kweplagin yethu.
Nov 4, 2015 ngo-10:06 PM
Yiza kwicala elimnyama kwaye wamkele amandla eCMS yorhwebo, Doug! 🙂
Nov 5, 2015 ngo-3:14 PM
Abantu abakruqulayo abakho nje kwindawo evulekileyo yomthombo.